अर्गानिक भनेकाे के हाे ? यस्ता छन यसका फाइदा - कृषि डेली
Home banner अर्गानिक भनेकाे के हाे ? यस्ता छन यसका फाइदा
अर्गानिक भनेकाे के हाे ? यस्ता छन यसका फाइदा
एजेन्सी – बीसौं शताब्दीसम्म संसारका सबै बालीहरू अर्गानिक थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र किसानहरूले सिन्थेटिक कीटनाशक विषादी र रसायनको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। त्यसपछि अर्गानिक खेती आज भएजस्तो बजारीकरणमा परिवर्तन भएको हो। आधुनिक युगको खेतीले बाली कायम राख्न र खेतबारीका जनावरलाई स्वस्थ राख्नका लागि मिसिएको रसायन प्रयोग गर्छन्।
दुर्भाग्यवश, यी रसायनहरूले पानी, वायु र माटोलाई विषयुक्त बनाएका छन्। अनावश्यक र उपयोगी नहुने जीवलाई मार्नका लागि प्रयोग हुने कीटनाशक, स्टेरोइड, हर्मोन, एन्टिबायोटिक र हर्बिसाइडहरू हामीले खाने खानामा पनि रहने गरेका छन्। यस्ता रसायनले हामीलाई क्यान्सरजस्ता रोग उत्पन्न गराउँछन्। यस्तै कारणले पनि अर्गानिक खानेकुराहरू पुनः चर्चित हुँदै गइरहेका छन्।
• स्याउ, अंगुर, स्टबेरी, आरु, साग, चेरी टमाटरहरू, आलु, आयातित केराउहरू, काँक्रो, गुलियो र पीरो मरिचहरू
Previous articleकतारका व्यापारिक मलमा ‘मेड इन नेपाल’ तरकारी
Next articleधान खेतमा माछापालन यसरी गर्नुहाेस (सम्पूर्ण जानकारी र विधीसहित)